I-China OEM Comined Transformer Electrical Box Type Transformer eneFactory Price-shengte abakhiqizi nabaphakeli |Shengte
I-OEM Comined Transformer Electrical Box Type Transformer eneFactory Price-shengte
I-transformer ehlanganisiwe (eyaziwa nangokuthi i-American box transformer), njengeyunithi yokuphakela amandla ebalulekile kunethiwekhi yokusabalalisa ikhebula, ibeka umshini wokulayisha ugesi ophezulu kanye nefuse yamandla kagesi aphezulu ebhokisini le-transformer.
Isakhiwo esivalwe ngokugcwele siyamukelwa ethangini.Amafutha e-Transformer ethangini anokufakwa okuhle nokukhipha ukushisa.
Inezinzuzo zesayizi encane, isisindo esincane, ukufakwa nokugcinwa okulula, ukuphepha nokuthembeka, ukubukeka okuhle nokunye.
Isetshenziswa kakhulu emadolobheni, ezindaweni zokuhlala, emahhotela, ezibhedlela, ezimbonini nasezimayini, eziteshini zikawoyela, ezikhumulweni zezindiza, ezitimeleni, ezikhumulweni zemikhumbi nakwezinye izindawo zokuphakela ugesi ngaphandle.
A: Isakhiwo sesiteshi esincane "iso" noma "umkhiqizo" isakhiwo.
B. Impahla yegobolondo yomkhiqizo i-aluminium alloy plate, ipuleti lensimbi engagqwali, ipuleti eliyinhlanganisela, ipuleti likasimende eliqiniswe ngefayibha yengilazi, njll.
C. Isizinda sesiteshi esincane senziwa ngensimbi yamashaneli noma usimende onokumelana nokugqwala okuqinile namandla anele okusebenza.
D. Isembozo esiphezulu somzimba webhokisi samukela isakhiwo esinezendlalelo ezimbili, esinokuvikela ukushisa okuhle, ukuvikelwa kwemisebe kanye nomthelela wokungenisa umoya.
E. Igumbi ngalinye lesiteshi esincane lihlukaniswe ngensimbi, futhi igumbi ngalinye lifakwe izinto zokukhanyisa.I-G ephezulu ye-transformer ifakwe idivayisi yokukhipha okuzenzakalelayo ukuze ilungiswe.
I-Transformer Ehlanganisiwe (I-American Box Transformer)
Imodeli Umthamo olinganiselwe (KVA) Ububanzi bokuthinta inhlanganisela ye-voltage Inombolo yeqembu lokuxhumana Akukho ukulahlekelwa komthwalo (w) Ukulahleka Komthwalo (W) Akukho ukulayisha okwamanje (%) I-impedance yesekethe emfushane (%) Usayizi wohlaka
Amandla kagesi aphezulu (KV) Ibanga lokusabalalisa (%) Amandla kagesi aphansi (KV) Ubude * ububanzi * ubude (mm)
I-ZGS11-100 100 0.4 200 1580/1500 1.8 4 11830x1355x1735
I-ZGS11-1000 1000 1150 10300 1 1830x1675x2005
Qaphela: Umumo womkhiqizo, usayizi nesisindo kuyidatha yesikhathi esithile, engashintsha ngenxa yokuthuthukiswa komklamo.
Okwedlule: Isiteji Esisezingeni Eliphezulu Seziqukathi Esakhiwe Kagesi Esisezingeni Eliphezulu I-wholesale-shengte
Olandelayo: Intengo Engcono Kakhulu DFW-12 Cable Branch Box Supplier-shengte
Isiteshi Sendawo Esenziwe Ugesi Esisezingeni Eliphezulu...